नेपाल, हङहङ र पिएनजीमध्ये एकले यसरी पाउनेछन् एकदिवसीय मान्यता – NepalNewsTime
नेपाल, हङहङ र पिएनजीमध्ये एकले यसरी पाउनेछन् एकदिवसीय मान्यता
विश्वकप छनोट अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा नेपालले हङकङलाई ५ विकेटले हराएपछि नेपाल, हङकङ र पिएनजीले एक दिवसीय मान्यता पाउने समान अवसर छ।
समूहमा चौथो भएको नेपालले अब एकदिवसीय मान्यताका लागि प्लेअफ खेल्न पाएको छ।
नेपालले प्ले अफमा पपुवा न्युगिनीसँग बिहीबार खेल्नेछ। पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गरे नेपालको एकदिवसीय मान्यता पाउने प्रवल सम्भावना हुनेछ। अर्को प्ले अफमा हङकङ र नेदरल्यान्ड्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो खेलमा नेदरल्यान्ड्स विजयी भए नेपालले अन्तिम प्ले अफ अघिनै एकदिवसीय मान्यता पाउनेछ। नेदरल्यान्ड्स पराजित भएमा नेपाल र हङकङबीच खेल हुनेछ। विजेताले एकदिवसीय मान्यता पाउनेछ। पिएजनीसँग पराजित भए नेपालको एकदिवसीय मान्यता पाउनेछैन।
प्रतियोगिताको सुपर सिक्समा पुग्दै स्कटल्यान्ड र यूएईले यसअघिनै वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायमै राखेका छन्।
कुन टिमले कसरी पाउँछन् वान डे मान्यता?
समूह बीको चौथो स्थानमा रहेको नेपालले प्लेअफमा समूह एको अन्तिम टोली पपुवा न्यूगिनीलाई जित्नुपर्नेछ। र समूह ए को चौथो टोली नेदरल्याण्डले समूह बीको पाँचौ टोली हङकङलाई हराउनुपर्नेछ।
समूह बीको पाँचौ टोली हङकङले समूह ए को चौथो टोली नेदरल्याण्डलाई हराएमा नेपालले सातौ स्थानका लागि हङकङलाई हराउनुपर्ने हुन्छ।
समूह बीको पाँचौ टोली हङकङले समूह ए को चौथो टोली नेदरल्याण्डलाई हराउँनैपर्छ। र नेपाल र पिएनजीको विजेतासँग खेलेर सातौ स्थानमा आउनुपर्छ।
समूह एको अन्तिम टोली पपुवा न्यूगिनीले समूह बीको चौथो स्थानमा रहेको नेपाललाई प्लेअफमा जित्नुपर्नेछ। र समूह ए को चौथो टोली नेदरल्याण्डले समूह बीको पाँचौ टोली हङकङलाई हराउनुपर्नेछ।
समूह बीको पाँचौ टोली हङकङले समूह ए को चौथो टोली नेदरल्याण्डलाई हराएमा पिएनजीले सातौं स्थानका लागि हङकङलाई हराउनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो छ फिक्सर
एकदिवसीय मान्यता पाए नेपाललाई के हुन्छ?
एकदिवसीय मान्यता पाउनु भनेको नेपाल जस्तो देशको लागि क्रिकेटमा निकै ठूलो फड्को हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसि) ले वार्षिक ७ देखि ८ करोड रूपैयाँसम्म बजेट छुट्याएको हुन्छ जसले स्तरीय प्रशिक्षक, अभ्यास भ्रमण, खेलाडीको भत्ता, सुविधा, नियमित प्रशिक्षणको लागि नेपाललाई आर्थिक सहजता हुनेछ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता निकै कम खेल्ने नेपालका लागि नियमित रूपमा ठूला प्रतियोगिता विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप, इन्टर कन्टिनेन्टल कप जस्ता प्रतियोगिता खेल्न पाउनेछ। साथै टेष्ट राष्ट्र सम्मिलित एसिया कप जस्तो ठूलो प्रतियोगितामासमेत नेपालको सहभागिता सहज हुनसक्छ। यस्तै नेपाल आईसीसीको एक दिवसीय वरियतामा पर्नेछ। Setopati bata